डाक्टरले एउटा गलत औषधी दिएका कारण यि किशोरीको शरीरका सबै भागमा रौँ पलाए !! – Ramailo Sandesh
डाक्टरले एउटा गलत औषधी दिएका कारण यि किशोरीको शरीरका सबै भागमा रौँ पलाए !!
March 15, 20210Comments
चिकित्सक`लाई सर्वसाधारण`ले भगवान् नै ठान्छन् तर कहिलेकाँही भगवान् गर्ने साना साना गल्तीले डाक्टरहरु`को विश्वास कम गर्छन् सर्वसाधारणले । यस्तै भएको छ स्पेन`मा । स्पेनमा पनि डाक्टर`को एउटा गल्ती`ले एक युवती`को जिन्दगीमा ठूलो समस्या निम्तिए`को छ ।।
उपचारमा खटिएका डाक्टर`ले रोग`को सहि पहिचान गरि उपचार नर्गदा एक युवती`को शरीर`भरी झ्याप्झ्याप्ती रौं उम्रिएका छन् । पेट दुखाईको समस्या निदान`का लागि डाक्टर`ले दिएको औषधि खाँदा ति किशोरीमा शरीरभरी रौँ पलाउ`ने समस्या देखा परेको उनका परिवार`ले उल्लेख गरेका छन् ।उत्तरी स्पेन`को क्यान्टब्रिया क्षेत्रको टोरेलागेभा शहर`का २० जना बालबालिकाहरु`मा पेट दुख्ने र ग्याँस उत्पन्न हुने रोग नि`को पार्न भन्दै डाक्टरले चलाएको औषधीको सेवन`पछि,
ति बालबालि`काहर`को शरीरमा अत्यधिक मात्रा कपाल`का जस्तै रौंहरु उम्रिएसँगै अहिले उनी ठूलो समस्यामा परेकी छिन् । स्थानीय प्रशासन`का अनुसार पेट दुखाइको समस्या लिएर आएका बालबालिकहरुलाई ओमेप्राजोल नामक औषधि दिनुपर्नेमा मिनोजिडिल भन्ने औषधि चलाएका कारण ति किशोरी यो समस्याबाट ग्रसित बने`की हुन् ।।
किशोरी`को परिवार`ले गलत औषधी दि`ने अस्पताल र चिकित्सक`लाई कारवाही`को माग गर्दै क्षतीपूर्तिको समेत माग गरेका छन् । अहिले ति किशोरी`को फरक तरिकाले फेरी स्थानीय प्रशासन`ले नै औषधी गर्न सुरु गरेको बताइए`को छ ।।
यो पनि पढ्नुहोस् :चिसाे माैसममा मुटु राेगिहरुले यस्ता सावधानि अपनाउनु अति आवश्यक, जानिराखाैँ !!:चिसाे माैसममा मुटु राेगिहरुले यस्ता सावधानि अपनाउनु अति आवश्यक, जानिराखाैँ । उपत्यका सहित देशका सबै भागमा चिसो बढे`को छ । यो मौसममा केटाकेटी र बुढाबुढी`को स्वास्थ्यमा विशेष ख्याल राख्नु पर्छ । केटाकेटी र बुढाबुढी`ले मात्रै होइन दम तथा मुटुरोग`बाट ग्रसित विरामीले पनि यो मौसममा विशेष सावधानी अपनाउनु`पर्छ ।।
चिसो सुरू भए`संगै राजधानीका अस्पतालहरूमा मुटुजन्य समस्या लिएर आउनेको संख्या बढदै गएको छ । हार्टएट्याक , हार्टफेल, व्लडप्रेसर तथा स्ट्रोकका विरामीहरू`को संख्यामा निकै बृद्धि भएको अस्पतालको तथ्याङ्क`ले प्रष्ट पार्छ ।
कसरी गर्छ त असर ?:- चिसोले सबैभन्दा पहिले हाम्रो शरीर`को बाहिरी भाग छालालाई असर गर्छ । त्यसपछि छालाबाट भित्र घुस्ने चिसोले छालासंगै टासिएको रक्तनलि`लाई असर पार्छ । चिसो बढदै जादा बाहिरी रक्तनलिहरू खुम्चिन्छन् । रक्तनलि खुम्चिए`पछि त्यहाँका रगतहरू भित्री नलितिर जान्छन् । अथवा बाहिरी नलिमा प्रवाह हुने रगतहरू भित्री नलिमै जम्मा भई बस्छन् ।
यसले रगत जम्नसक्ने खतरा पनि हुन्छ । उता बाहिरी न`सा`का रगतहरू भित्री नसामा प्रवेश गर्दा त्यसको चाप बढछ । भित्री न`सा`मा रगतको बाडी जस्तो हुन्छ यसको प्रत्यक्ष असर मुटुमा पर्न जान्छ । मुटुका धमनीहरूले काम गर्न सक्दैनन् । मुटुमा रक्तप्रवाह अनन्तुलित हुनासाथ त्यसले रक्तचाप बढाउ`ने काम गर्छ ।
त्यति`मात्रै होइन चिसोकै मौसममा रगत जम्ने सम्भावना हुन्छ । किन`भने चिसो बढेका बेला रगत जमाउन मद्धत गर्ने (कार्टिसोल )प्रोटिनको स्तर समेत बढ्छ । शरीरमा तापको मात्रा मिलाउन मुटु बढी क्रियाशिल हुनुपर्छ । यसले पनि प्रेसर बढाउछ ।
जाडो`का बेला रगत जम्ने मात्रै होइन धमनिहरू समेत कडा हुन्छ । कहिले काही यसैको प्रभावले रक्त प्रवाहमा अवरोध उत्पन्न हुन्छ । यस`बाट समेत व्लड प्रेसर बढ्न सक्छ । जव रगत प्रवाहमा अवरोध हुन्छ । यसले हार्ट एट्याक, हार्टफेल तथा स्ट्रोक (मस्तिष्क घात) हुन सक्छ । चिसो`कै बेला बाथ मुटु समेत हुनसक्छ । चिसो`ले केटाकेटीमा घाटी दुख्ने टन्सिल बढने र त्यसैको असर`ले बाथ मुटु हुने समस्या देखा`पर्छ ।
त्यसैगरी चिसोले फोक्सो`मा असर गरी त्यसले निमोनिया हुने सम्भावना रहन्छ । बालक तथा बद्धहरूका लागि चिसो`को कारण`ले हुने निमोनिया जोखिम युक्त नै हुन्छ । फोक्सोमा असर हुने त छदैछ कहिले काही फोक्सो`को असर`ले मुटुमा समेत अप्ठेरो पार्न सक्छ ।
चिसो`को कारण दिनहु मान्छे`को मृ-त्यु हुनुमा मुटुको समस्या प्रमुख हुन सक्छ । मुटुमा रगतप्रवाह असन्तुलित हुदा यस्तो हुने गर्छ । त्यसैले जाडो बढेका बेला मुटुरोगी, वृद्ध तथा बच्चाहरू`ले विशेष सावधानी अपनाउनु पर्छ ।
उसो भए के गर्ने त ?:मुटुरोगीहरू जाडो बढेका बेला मर्निङवाकमा ननिस्कने, मुटुरोगीले नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने, व्यायम गर्न परे घरभित्रै गर्ने, शरीरमा चिसो पैतला`बाट घुस्ने हुनाले बाक्ला मोजा लगाउने ।,
छातीतथा फोक्सोमा चिसो घुस्न नदिन न्यानो कपडा लगाउने, खुट्टामा चिसो रहे शरीर नतात्ने हुनाले खुट्टाको पैतला तताउन बल गर्ने, खुट्टा नताते तातोपानी`मा डुवाउने, हडवाटर व्यागले सेक्ने, तेल तताएर पैताला`मा विशेष मालिस गर्ने, विहानको घाममा ढाड फर्काएर बस्ने, शरीरमा बाक्ला कपडा लगाउ`ने, बस्ने कोठामा भयान्टीलेसन राखेर हिटर ताप्न सकिन्छ ।।
के-के खाने त ?:तातो सुपहरू प्रसस्त खा`ने, तातो पानी प्रसस्त खाने,–कालोचिया`मा मरिज हाली खादा पनि शरीरका लागि राम्रो हुन्छ ।, गहतको झोल बनाई खादा पनि चिसो`बाट बच्न सकिन्छ ।, ज्वानोको झोल बनाई खान पनि सकिन्छ ।,
गुन्द्रुक`को झोल, भट्टमास र भुटेको मकै खादा पनि जाडो`मा नि`कै लाभ दायक हुन्छ । मुुटुरोगीहरूले माछा तथा कुखुरा`को मासुहरू खान मिल्छ ।, लसुन तथा अदुवा`ले पनि फाइदा गर्छ ।।
काेराे-ना भा- ईरस (काे-भिड – १९ ) बाट बच्न सबैले सामाजिक दुरि कायम राखाैँ र साबुन पानिले मिचि मिचि हात धुने बानि बसालाैँ । जनहितमा जारी सन्देश ।। हाम्राे न्युजहरु हजुरहरुलाई कस्ताे लाग्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ ।
विदेश जान अब काठमाडौं धाउनु नपर्ने, नयाँवर्षदेखि भैरहवाबाट सिधै उडान
प्रहरी आएर कपडा खोलि श्रीमती माथि चड्दै गरेको देखेपछि श्रीमानले जे गरे …(भिडियो सहित)
क,ठै नाबालक हरुको बिचल्ली ,३ वर्ष पहिले बुवाको मृ’त्यु, अहिले आमा ले पनि संसार छो’डि’न्
मेलम्चीमा विनाशकारी बाढी पहिरो
यसकारण देउवाले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलाई हटाउन खोजे !
आयोग नै मार्ने निर्णयले १२लाख भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीहरू मारमा परेका छन्:देवि ज्ञवाली
एमसीसी पास गर्ने अन्तिम तयारी, नेपाल र अमेरिकाबीच दिल्लीमा आजै बेलुकी यसरी हुदैँछ सहमती, पुरा पढ्नुहोस्